Flat Plate Solar Water Heater Factory, mpamatsy - Mpamokatra hetra mpamokatra rano ho an'ny masoandro avo lenta
SolarShine compact thermosyphon water heater heater no heater tsara indrindra amin'ny masoandro namboarina ho an'ny rafitra rano mafana an-trano, afaka manome rano mafana ho an'ny trano fonenana, villa ary trano fonenana, sns ... tankin-drano mandeha amin'ny herin'ny masoandro, bracket mahery ary mpanara-maso mandeha ho azy, afaka mahazo rano mafana avy amin'ny masoandro ianao ary hitsitsy vola.
Ny heaters an'ny solar thermosyphon an'ny SolarShine's 150L dia natao ho an'ny rafitra rano mafana an-trano any an-trano, izay miaraka amin'ireo singa fototra manangona mpamaky masoandro takelaka, tankina rano misy masoandro voahidy, fonosana mahery ary mpanera mandeha ho azy, afaka mahazo rano mafana avy amin'ny masoandro ianao ary hamonjy ny vidiny .
80 galona Solar Geyser miaraka amina mpanangona takelaka ho an'ny karazan-tsarimihetsika an-trano
Ny hezeran'ny masoandro an'ny geyser 80 an'ny galona avy amin'ny SolarShine dia mifangaro amin'ny tanky masoandro 300L, 4m² takelaka fisaka, takelaka matanjaka ary mpanara-maso mandeha ho azy.
200L Compact presseurized Solar Water heater miaraka amin'ny Flat Plate Collector
200L Solar Water Heater dia mety ho an'ny fianakaviana olona 4 - 4. Ny singa ao amin'ny rafitra dia misy: mpanangona takelaka fisaka 2,4m², tanky masoandro 200L, fonosana ary kojakoja rehetra, tena mora apetraka.
250L Compact Pressurized Solar Water Heater miaraka amin'ny Flat Plate Collector.
250L Solar Water Heater dia natao ho an'ny fianakaviana olona 5. Ny singa misy azy ireo dia: mpanangona masoandro takelaka 4m² fisaka (PCS roa), tanka fitehirizana rano mafana 250L, kojakoja feno toy ny mpanara-maso ary fonosana mahery.
300L Solar Water Heater miaraka amina karazana presseur plate plate
300L Solar Water Heater dia rafitra thermosiphon, karazana matevina izy io izay mety ho an'ny fianakavian'olona 5-6, ny rafitra dia misy ny mpamongady panneaux solaire, ny geyser amin'ny masoandro be fanerena, ny fifehezana ary ny fonosana feno.
Mizara roa heater-drano amin'ny masoandro miaraka amin'ny mpamorona Solar Plate Flat
Ny heaters rano manohitra ny hatsiaka an'ny masoandro dia natao ho an'ny faritra misy toetr'andro mangatsiaka amin'ny ririnina, voahodina izy ireo ary mihodina ny fantsona mpamokatra rano avy amin'ny masoandro, afaka 150L ka hatramin'ny 600L ny fahaiza-manao. Mety amin'ny fanafanana rano ao an-trano.
Split Solar Water Heater System ho an'ny trano namboarina Open Loop Type
Ny rafitry ny heateran'ny rano an'ny masoandro solarshine ho an'ny trano dia manome fomba mahomby hahazoana rano mafana avy amin'ny masoandro. Ampiana amin'ny mpanangona takelaka mahomby avo lenta, mpanara-maso ny rafitra manan-tsaina na toeram-piasana ary tankin-drano amin'ny masoandro voahidy.